Teepee miaraka amin'ny pompoms - Moi Mili
Ny tranolain'i Moi Mili dia tsara amin'ny alàlan'ny haingo ny kianja filalaovana ny zanatsika na fanomezana indraindray. Ny teebehay manana endrika mahazatra dia nozairina avy amin'ny lamba matevina na lamba rongony. Ny manontolo dia voapaika amin'ny fanamboarana landy. Ireo modely amin'ity sokajy ity dia vita miaraka amin'ny dantelina samihafa, kasety na pompoms. Ny fidirana amin'ny tipi sy ny varavarankely dia milahatra miaraka aminy. Ity haingo ity dia mampiavaka ny tranolaintsika.
Teepee dia manana varavarankely eo ankaviany. Ny tehina kesika ataonay dia miolomotra, ahosotra, voafatotra amin'ny tady matevina matevina ny rafitra rehetra. Ny tsipika vita amin'ny hazo dia nafenina ao amin'ny tonelina natao tamin'ny vodiny. Ny tranolay mahafinaritra dia manana rindrina 5 sy toby pentagonal, mahatonga azy ireo ho matanjaka kokoa ary lehibe kokoa noho ny lay misy ny fototra efatra.
Izahay dia mamokatra any Polonina, indrindra avy amin'ny vokatra avy any poloney. Izahay dia mikarakara ny antsipiriany rehetra sy ny kalitaon'ny asa vita sy ny famokarana. Ny tipi dia mitondra manual ary fonony. Manasa anao izahay hamorona andian-tsoratra marevaka avy amin'ny vokatra.
Tranolain'i Teepee ho an'ny ankizy "Mint fog"